Boston Adult Technical Academy | Boston School Finder
BPS/Degmada11aad - 12aad
Heer Gobal: Macluumaad kala dhiman
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 9:00am-3:30pm
Lambarka Taleefanka 617-635-1542
Ardayda jira da'da 19 sano waxaa qasab ku ah inay dugsiga laxariiraan si waraysi looga qaado. Ardayda jira da'da 20-21 1/2 waxaa si ootomaatig ah loogu darayaa brnaamijka marka ay iska diiwaangashaan Boston Public Schools.
Machadka Farsamada Dadka weyn ee Boston waa dugsi sare ee kale ee qaangaarka, himiada leh, dhalinyarada u dhaxayso da'da 19-22. Waxaan nahay bulsho qiimaynsa kaladuwanaanta, xoojinta shaqsiyada, hufnaanta, iyo dookhyada kaladuwan anagoo ardayda siina fursado macno leh oo laxariira noloshooda dugsiga sare kadib. Marka ardaydeenu kabaxaan dugsigaan, waxaan filaynaa inay barteen xirfada iskukalsoonaanta, aqoonta luuqada, iyo xirfadaha dugsiga sare kadib si ay unoqdaan hogaamiyaal iskukalsoon bulshadooda dhexdeeda ayna xaqiijiyaan yoolalkooda.
Waa dugsi gaar ah oo sare looguna talagalay ardayda waawayn, oo da'doodu tahay 19–22.
Wuxuu baxshaa Shahaadada diploma ee Dugsiga Sare ee Boston.
Barnaamijka waxbarashada ee farshaxanka luuqada Ingiriiska, xisaabta, sayniska, iyo aadanaha. Kumbiyuutarada ayaa yaala fasalada.
Barnaamijyada Kabida Buundada.
Dookha isdiiwanagalinta labo jeer ee Kuleejka Bulshada.
Barnaamijka Barashada Xirfada.
Tababarayaasha Qalin jabinta.
Caawimaada Kuleejka iyo codsiga dugsiga sare Kadib.
Arday kuhadla luuqado badan, oo kasoo kalajeeda qoomiyado kaladuwan.
Diyaarinta xirfadaha kuleejka iyo shaqada ee dugsiga sare kadib.
SEI-Luuqado Kaladuwan, ESL ta Waxbarashada Gaarka ah.
Xarunta lagu Barto Ingiriiska - Luuqadaha Badan ee Fasallada 9, 10, 11, 12
Barnaamijyada dugsiga sare ee gaarka ah ayaa diyaar ah. Laxariir dugsiga si aad macluumaad dheeri ah uga hesho.
Waxbarashada Kale oo Beddelka ah
Xogta dadaalka aqooneed ee hoos ku qoran waxaa loogu talagalay natiijooyinka ardayda danbe ee aadan doona Imtaxaanka MCAS. Si aad uhesho macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare) .
Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waa isla xogta dhamaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya.
Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas.
20 oo kamid ah23
3384 oo kamid ah4296
66360 oo kamid ah78298